Ny androaniko | Ankapobeny | 4
[Ankapobeny ] 30 Jiona, 2017 23:16
Karaba, na ny tantaran'ny fanolanana tambabe ao Afrika.
Efa elaela ity no saika nadikako fa zao vao tonga ny finiavana, ary tena nandika tamin'ny teny gasy fotsiny aho fa TATO ny loharanon'ny lahatsoratra tena mba nahaliana ahy.
Ka angano angano arira arira... firy amintsika no mahay ny tantaran'i Kirikou sy Karaba mpamosavy ? Tena laniko tsianjery izy io taloha satria nataonay mianaka toy ny misakafo isan'andro ny fijerena ilay kapila.
Ity dia enti-mody nataon-janako omaly tamin'ny fankalazana ny "Andro Iraisam-pirenena ho an'ny Zon'ny vehivavy", natao hampitahana fa ny tantaran'i Karaba sy ireo lehilahy tao an-tanàna dia tsy inona fa tantara mampalahelo momba ny fanolanana tambabe mandritra ny ady ao Afrika.
Mifototra amin'ny fanadihadiana ny fihetsik'i Karaba izy ity. Ho an'izay mahalala ilay tantara dia tena mankahala lehilahy i Karaba ka navadiny ho sary vongana avokoa (Bikeko). Toa izao ilay tantara (etsy ambany ny horonana iray manontolo ho an'izay tsy mahalala) :
Rehefa nitady hevitra handresena an'i Karaba i Kirikou dia lasa nankany amin'ny "raibeny", ilay olon-kendry monina any anivon-tendrombohitra any...ka izy no nampahafantatra azy hoe maninona i Karaba no tsy tia lehilahy sy manova azy ireo ho sary vongana.
Nandritra ny fitantarany no nahalalana fa i Karaba dia tovovavy tena tsara tarehy. Nosamborin'ny lehilahy maromaro tao an-tanàna izy, nifanotofan'izy ireo ary nogejainy tsy hihetsika mba hanitrihan'izy ireo "tsilo misy poizina" tao amin'ny hazon-damosiny. Naharary azy mafy tokoa izany ka zary kapoaka mangidy ho azy nanomboka teo ary nampivadika azy ho mpamosavy.
Mafy loatra ny hirifiry niainany isan'andro ka tsy namela azy hiaina, hitia...ary nahatonga azy hankahala ny lehilahy, izay nozoniny niaraka tamin'ny tanàna iray manontolo.
Raha dinihana ilay tantara dia tsy inona akory fa fanoharana ny fanolanana mianjady amin'ny vehivavy any Afrika. Fomba nentin'i Michel Ocelot, mpanoratra sy mpamorona ilay horonantsary, izany hitoriana ny fanolanana mandritra ny ady izay miafara amin'ny fanosehana ataon'ny fiaraha-monina.
Hita eto fa nifanotofan'ny lehilahy maromaro izy ary nositrihan'izy ireo "tsilo", izay azo lazaina ho ny filahiany, ary niteraka fanaintainana mafy ho an'i Karaba. Vokatr'izany dia natosiky ny tao an-tanàna izy ary nanjary nitoka-monina tany ivelany.
Maneho ny zava-misy iainan'ireo vehivavy niharan'ny fanolanana tambam-be na nandritra ny ady izany. Tsy vitan'ny nianjadian'ny herisetra izy ireny fa mbola diso ihany koa eo imason'ny hafa. Rehefa manosi-bohotànana azy ireo ny iray tanàna dia mandà ny maha-tompon'andraikitra azy sy ny tsy fahafahany manala ny fijalian'ireo vehivavy izay tsy vitany narovana.
Kirikou eto dia taratry tsy fananantsiny sy ny herimpo. Nony hainy ny tsiambaratelon'i Karaba dia nanolo-tena hanala ny fahoriany izy : nongotany tamin'ny nifiny ilay tsilo nasisik'ireo lehilahy ireo ka afaka teo ny fanaintainany. Ary teo dia niverina nankaf­ý ny fiainana i Karaba, namela ny helok'ireo lehilahy ka namerina azy ireo tamin'ny tena endriny fa tsy sary vongana intsony ary nihavana tamin'ny iray tanàna. Niova daholo ny manodidina azy ary ny zavaboahary dia niverina tamin'ny laoniny, satria ny fanolanana sy ny herisetra natao azy dia nanozona ny tanàna iray manontolo ka nahatonga azy ho maina katana, tsy nisy hazavana, tsy nisy rano, tsy nisy voninkazo, sns.
Ny tian'ny mpanoratra avoitra izany dia ny hoe, raha manolana vehivavy dia manolana ny tontolo, manozon-tena ary mitady fahoriana ho an'ny tena. Tsy mpampijaly akory i Karaba mpamosavy fa nianjadian'ny herisetra, saingy nisikin-kerimpo izy nanasazy ireo mpampijaly azy, dia ny fiaraha-monina, hany ka natosik'izy ireo sy natokany monina.
PS : Mahery ilay zanako, nosokafany ny masoko tamin'ity tantara efa haintsika ity, tantaran'i Karaba fa tantaran'ireo vehivavy an-tapitrisa ianjadian'ny herisetra, ny fanolanana mandritra ny ady, ny fanolanana tambabe any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Congo sy any an-toeran-kafa koa.
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27 28 29 Manaraka»